Tombana amin’izay tsy tomombana… | NewsMada
Tombana amin’izay tsy tomombana…
Amin’ny famaranana ny taona toy izao ny fanaovana jery todika: fijerena ny zava-bita hamaritana indray ny hatao. Manao ahoana? Mila maso tsy miangatra izany, andrao malaky mionona sy mora afa-po amin’izay kely natao na natomboka ny tena. Ny tsy vita sy ny fikasana mandrakariva tsinona no be lavitra sy lehibe amin’izao fiainana izao, indrindra ny amin’ny fihatsaram-piainana… lanja miakatra.
Amin’izay fanaovana tombana izay, anisan’ny ahombiazana sy manafaingana izay atao ho amin’ny tsaratsara kokoa no ho ny teo aloha ny fanitsiana izay tsy nety. Mila fanekena ny fahadisoana izany, fanitsiana azy sy fialana aminy. Tsy ho sasatry ny miarina ny tena, ka hoe hiainga amin’ny tsy misy hatrany. Izay no maha zava-doza ny fanakorontanana, ny fandravana efa, ny tsy fanohizana izay tsara…
Ny ezaka natomboka amin’ny kely no lasa lehibe, ny atao isan’andro no mitambatra ho zava-bita mandritra ny taona, ny ataon’ny tsirairay no mitondra fiovana sy fanovana eo amin’ny isan-tokantrano, ny isan-tanàna, ny isam-paritra; eny, ny firenena aza. Mby aiza? Fanaovana tombana izany izao. Misy ny tsy miova na tsy vonon-kivoatra amin’ny ataony. Izay ilay hoe fahazarana… ratsy fa tsy mampandroso.
Inona àry izay faharazan-dratsy tsy mety mampandroso izay? Tsy hoe fanaovana tombana izany fotsiny ny tonon-taona toy izao, fa tena fanitsiana sy fialana ny tsy ahombiazana. Eo amin’ny sehatry ny fiarahamonina hatramin’ny firenena, ohatra: mby aiza ny hoe fanajana sy fampiharan-dalàna? Anisan’ny fositra tsy nisian’ny filaminana sy fahamarinan-toerana io, nampiverin-dalàna ho sasatry ny miarina lava.
Mby aiza koa, ohatra, ny fahazotoana sy fitozoana amin’izay atao? Sao mafana fo am-boalohany… Miara-dalana amin’izay ny andian-toetra amam-pomba takin’ny fanovana sy ny fampandrosoana: ny fitsinjovana ny soa iombonana, ny fijerena lavitra amin’izay atao… Mila fahasahiana sy fijoroana ny fandinihan-tena sy fanaovana tombana amin’izany. Izay miova no afa-kanova, izay mandroso no afa-kampandroso…